Ihe onyonyo ohuru nke LG flagship na-esote, LG G6 na-agba ehi | Akụkọ akụrụngwa
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gosiri gị ọtụtụ onyonyo nke ihe Samsung Galaxy S8, a ukwuu na-atụ anya nlereanya ọ bụghị naanị site na ndị ọrụ ma site na ya kacha rivals ịhụ ụzọ ụlọ ọrụ Taiwanese chọrọ akara. Ihe doro anyị anya bụ na okpokolo agba dị n'anya apụla n'anya kpamkpam, atụmatụ nke ọtụtụ ndị nrụpụta na-agbaso na smartphones ọhụrụ ha. Mana ọ dịka ọ bụghị naanị onye chọrọ ịtọ omume, ebe ọ bụ na Xiaomi na Mi Mix, chọkwara ịgbaso ụzọ eserese site na mbenata okpokolo agba nke njedebe ọhụrụ dị elu ruo na nke kachasị, omume na ya yiri ka ndị nrụpụta ndị ọzọ anaghị eso.
Ihe onyonyo anyị gosiri gị ụbọchị ole na ole gara aga site n’aka onye nrụpụta ikpe, Ghostek, gosiri anyị ihe Samsung S8 ga-adị ka ya n’ozuzu. Otu onye na-emepụta ihe mkpuchi, akpọrela ya ọzọ na-enyo onyonyo ohuru banyere otu okwu ha ga esi di na ohuru LG ohuru, LG G6, ọnụ nke na-aga nke ọma LG G5, nke ahụ ewepụtakwala ngwa ngwa nke nwere obere ihe ịga nke ọma n'etiti ndị ọrụ.
Na ihe oyiyi anyị na-ahụ na ihuenyo nwere akụkụ dị mma nke mpaghara ihu ngwaọrụ ahụ, a 5,7 inch ihuenyo, nwere usoro yiri 18: 9 nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ ga-arụ ọrụ izu ole na ole gara aga. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ga-adị n'azụ ngwaọrụ ahụ n'akụkụ igwefoto abụọ nke ọdụ a ga-enye anyị, nke ahụ ga-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ nke iPhone 7 Plus.
LG na-eme ihe niile enwere ike ime ka a ghara ikpughe asịrị banyere nkọwa ya, mana o yikarịrị ka ndị ọrụ a na-achịkwa ọnụ ọhụụ a. Snapdragon 835 na n'etiti 6 na 8 GB nke ebe nchekwa RAM. Ihe ọzọ enwere ike ịkọwapụta ọnụ a, ha na-ekwusi ike na ọ ga-eguzogide mmiri, ọrụ ọhụrụ ndị nrụpụta ngwaọrụ niile na-amalite ịmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ihe onyonyo ohuru nke ọkwa LG ọzọ, LG G6, ehi ehi
Usoro Lumia dị ọzọ na Windowslọ Ahịa Windows nke America